फागुन ५ देखि ११ गतेसम्मको साप्ताहिक राशीफल
HOME » फागुन ५ देखि ११ गतेसम्मको साप्ताहिक राशीफल
डिसी नेपाल , ५ फाल्गुन २०७४
जोतिषाचार्य : भानुराज अर्याल
यो साता उतम रहनेछ । सबैकुरा मिल्नाले सबैतिर आनन्द महशुस गरिनेछ । आफूले गर्न लागेको काममा घरपरिवारबाट पनि राम्रै सहयोग पाईनेछ । गरेको धेरैजसो काम सफलता पाईनेछ । ठुला कामहरुको नेतृत्व लिने अवसर पनि आउनेछ । साथीभाई तथा पारिवारिक जमघटहरु भैरहनेछन । तर अधिक भावुक भइएमा ठगिने संभावना पनि रहेकोले आफ्नो भावुकता लाई लुकाउनु उचित हुनेछ । भूमी तथा व्यापारबाट निकै लाभ हुनेछ भने आम्दानीको स्तर बढ्नेछ । साथीभाईसंग उत्साहपूर्ण भेटघाट पनि हुनेछ । सोचेअनुरुपको प्रणय सुखले गर्दा जीवन सफल भएको महशुस गरिने छ । खानपानमा पथपरहेज गरे स्वास्थ पनि राम्रै रहनेछ ।
साता राम्रो रहनेछ । कामको उतरदायीत्व निकै बढ्को महशुस गरिनेछ । आफूले गरेको कामको प्रतिफललाई सोचेर काम गरिनेछ। समयक्रमले गर्दा साथीभाईहरुको काम सुल्झाउन सहयोग गरिनेछ । आफूले गेरको कामको प्रशंसा तथा पुरस्कार पाईनेछ । पदोन्नतिको संभावना प्रबल रहेको छ । घर तथा कार्यालयमा मान-सम्मान बढ्नेछ भने आफू भन्दा माथिल्लो तहका हाकिमहरुले पनि प्रशंसा गर्नाले मन प्रशन्न हुनेछ । कामको मुल्याकंन उच्च हुनेछ । आम्दानिको मात्रा राम्रै बढ्नेछ । सोचेअनुरुप खर्च गर्न पाईनाले घरमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु पनि हुनेछन । केही खटपट भएपनि जीवनसाथीसंग प्रणय सुख पाईनेछ । पित्त बढ्नाले पेटमा बिकार हुनसक्छ तसर्थ खानपानमा सजग रहनुहोला ।
शुरुमा पुराना कुराहरुले अल्झाए पनि यो साता राम्रो नै रहने छ । सही रुपमा विश्लेषण नगर्नाले आफ्नै मान्यजनसंग बादविवाद हुन सक्छ । घरका मान्छेले अनैतिक भएको आरोप पनि लगाउन सक्ने हुनाले आफ्नो व्यबहार र आचरणलाई सामाजिक मर्यादा भित्रै राख्ने कोशिस गर्नुहोस । मनको चंचलताले गर्दा काम पुरा हुन समय लाग्न सक्ने हुनाले काममा आफूलाई एकाग्र राख्नुहोला। समय वा भाग्यले साथ दिनाले अफ्ठ्यारो परिस्थितीबाट निस्कन सकिनेछ । काममा अपयस हुनसक्ने हुनाले अरुको भर नपर्नुहोला। ब्यापार व्यावसाय भैरहेको मन्दीको स्थिती बाट बिस्तरै निस्कने परिस्थिती बन्ने हुनाले धैर्यवान बन्नुहोला।
शुरुमा मनमा छाएको नैराश्यताले दुखित महशुस गरिने छ तर सोमबार देखि साता राम्रै बित्नेछ । काममा अढ्चनहरु बढ्न सक्ने र आफूले पहिले गरिएका गल्ति कमजोरीहरुको दण्ड(सजाय पाईन सक्ने हुनाले साबधान रहनुहोला। आफन्तहरुले पनि यो महिनाभर केही सकारात्मक सहयोग गर्ने छैनन् तसर्थ उनीहरुबाट आसा नगरेकै बेस होला । आफूले नसोचेको ब्यक्तिले गर्दा अपर्झट लाभ भने हुनसक्नेछ। अरुले गरेको प्रगतिको गुढसुत्र आफुले थाह पाउनाले ब्यापारबाट बढि लाभ लिन सकिएला। साझेदारी व्यबसाय गरेकाहरुलाई भने यो समय लाभकारी नै हुनेछ । जग्गा सम्बन्धि विबाद आउनसक्ने हुनाले सचेत रहनुहोला।
यो साता सामान्यतः राम्रै बित्नेछ । केही कुराहरुमा सम्झौता गरेमा व्यापार व्यबसायबाट राम्रै लाभ हुनसक्नेछ । बैदेशिक ब्यापारमा केही फैलाउन सकिनेछ । नसोचेका साथीभाइले संगै काम गर्न प्रस्ताब गर्न सक्ने छन् र यो प्रस्ताब फलदायी नै हुनेछ। व्यवसाय हाल रहेका समस्याहरु बिस्तारै समाधान हुनेछन । कामदार वर्गका लागि भने कामको बोझ बढेको महशुस हुनेछ । समयले साथ दिनाले आम्दानीको आकार बढ्नेछ भने खर्च पनि केही बढ्नेछ । सन्तान पक्षबाट केही खिन्नता महशुस गरिनेछ । जीवनसाथी संग मनमुटाब भए पनि बैवाहीक सम्बन्ध राम्रै हुनेछ । अपच तथा वायूले सताउन सक्ने हुनाले स्वासथ प्रति सावधान रहनुहोला।
यो साता उतम रुपमा बित्नेछ । आयका बिभिन्न स्रोतहरु बढ्ने छन् । बढि मेहनत गर्नाले लाभको आकार पनि बढ्नेछ । नियमित आम्दानीका स्रोतहरुलाई दिगो बनाउने प्रयास गरिनेछ । ब्यापार व्यबसायमा प्रतिस्पर्धा भए पनि जित हासिल हुनेछ । सुखसयलका सामनाहरुमा खर्च गर्ने मनोवल बढनेछ । ऋण लिएर भए पनि घरजग्गा खरिद गर्न यो समय उपयुक्त छ । दिर्धकालिक सम्पतिमा गरेको लागानिले पछि प्रतिफल पनि राम्रो दिनेछ । तपाँईका शत्रुहरु आफै पराजित हुनेछन । सन्तानको पढाई र स्वास्थमा केही समस्या आउनाले मनमा केही चिन्ता बढाउने छ तापनि यो स्थिति २-४ दिनमा नै समाधान हुनेछ । जीवनसाथीसंगको मतभेद तथा वाकयुद्धले प्रणयसुखमा केही बाधा हुनेछ।
यो साता राम्रै बित्नेछ । आईतबार र सोमबार बिशेष लाभ हुनसक्नेछ । शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर आउन सक्नेछ। तापनि यो समयमा आफ्नो एकोहोरो जिद्धिले मात्र काम गरे लगानी डुब्ने संभावना रहने छ । भरपर्दा पारिवारिक सदश्य वा मित्रको सल्लाहमा काम गर्दा केही सुरक्षित हुने देखिन्छ । अरुले गरेको कामको देखासिखीमा लगेमा गलत निर्णय लिईनसक्ने हुनाले हतारमा निर्णय नगरे राम्रो हुने देखिन्छ । अचल सम्पतिमा लगानी गर्दा खिचलोमा परिने संभावना रहेको छ। पेशाकर्मीहरुका लागि भने समय राम्रो नै रहनेछ । सानोतिनो यात्राको अबसर पनि पाईने छ । सन्तान पक्षबाट केही असन्तुष्टी अनुभव गरिनेछ । आमा तथा आफ्नै स्वास्थ प्रति अलिक चनाखो रहने कोशिस गर्नुहोला।
साता उत्साहपूर्ण नै बित्नेछ । लग्न र भाग्य दुबैले साथ दिनाले दमित महत्वाकांक्षा बाहिर आउने छन् । बढेको आत्मबिश्वासले महत्वाकांक्षामा अधि बढाउनेछ । दिर्घकालिन प्रतिफल आउने गरि लगानीका अवसर पनि पाईन सक्नेछ। पारिवारिक जमघटका आयोजना गरिनेछ । पठनपाठनमा लागेका लाई बिदेसमा अध्ययन गर्न जाने अवसर पनि जुटन सक्नेछ । आम्दानीको पाटो राम्रै रहनेछ । आमाको स्वास्थले केही चिन्ता दिनेछ । खर्च बढ्नाले मनमा केही असन्तोस पनि रहनेछ । बैवाहिक जीवन सन्तोषजनक नै । नकारात्मक टिप्पणी र बढेको क्रोध नियन्त्रण नगरे समस्यामा परिएला।
साता औसत रुपमा बित्नेछ । पहिले देखि रोकिएका कामहरु अब बिस्तारै पुरा हुनेछन् । आफूले सोचेका ब्यक्तिले सहयोग नगरे पनि काम पुरा हुनेछ । अरुले गर्दा असफल भइएला कि भन्ने चिन्ताले सताउँनेछ तापनि आफ्नै लगनशिलताले आँटेको काम पुरा गरिनेछ । जुनसुकै काममा पनि सफल बन्न बढि मेहनत गर्नु पर्नाले मनमा नैराश्यता पनि आउनेछ । समयले राम्रै साथ दिनेछ भने आम्दानी पनि बढ्ने छ । खर्चको मात्रा अनायास बढ्न सक्ने हुनाले सचेत रहनु जरुरी छ । क्रोधलाई नियन्त्रण नगरे चरित्रमा नै दाग लाग्न सक्ने परिस्थिती बन्न सक्छ तसर्थ ध्यान योग गरेर आफ्नो क्रोध नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ।
मकर (भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी)
साता सोमबार देखी सामान्य रुपमा बित्नेछ । आफुले सोचे अनुसार काममा सफल भइने छैन् । आफु अनुकुल परिस्थिती बनाउन निकै मेहनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । कामहरु समयमै पुरा गर्न साझेदारहरुको सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ । तपाँईले बोलेका कुराको अरुले गलत अर्थ लगाउन सक्ने हुनाले बोल्दा होस पुर्याउनु जरुरी छ । भाग्यले साथ दिनाले थोरै भए पनि बचत भने बढ्नेछ। आम्दानी भने यो समयमा सामन्यत राम्रो नै रहनेछ । शेयरका लगानिकर्ताहरुलाई भने यो समयमा राम्रो फाईदा हुने देखिन्छ । खर्च कम गर्ने उपाय भने तपाँईका लागि चुनौतिपूर्ण हुनेछ।
साता राम्रो नै बित्नेछ। मोजमज्जा तिर ध्यान जानाले सोचे अनुसारको काम गर्न भने सकिने छैन। काममा केहि न केहि अफ्ठ्यारोहरु आउने छन तसर्थ समयमै सचेतता अपनाउनु होला। यो समयमा ऐकोहोरोपान आउन सक्ने हुनाले परिवारको सर-सल्लाह लिएर काम गर्दा उचित हुनेछ। जीवनसाथीको स्वास्थले बिग्रनाले तनावको अनुभव गरिने छ। भाग्यले साथ दिनाले आम्दानीमा भने बृद्धि नै हुन सक्नेछ । तर छिट्टो प्रतिफल दिने जस्तै शेयरहरु बाट भने सोचे अनुसार फाईदा हुनेछैन। धार्मीक गतिबिधि बढ्नाले मनमा केही सन्तोष महशुस गरिने छ।
साता चुनौतिपूर्ण रुपमा बित्नेछ। खर्च गर्नु पर्ने धेरै क्षेत्रहरु देखिने छन । मनमा बैराग्यताको अनुभव हुनाले काममा पनि बिलम्ब होला। केही बढि मेहनत गरेमा काममा सफल भईनेछ। क्रोधको मात्रा धेरै बढ्नेछ। थोरै प्रतिफलका लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्नेछ। नसोचेको ठाउँबाट चुनौतिको सामना गर्नु पर्नाले मनमा द्वन्द महशुस गरिनेछ। यो समयमा मनमा कुरा नराखि पारिवारसंग सर-सल्लाह गर्नाले केहि राहत हुनेछ । पहिले गरेका लागानीबाट प्रतिफल बढ्नेछ भने नियमित आम्दानीको पाटो ठिकै रहेनेछ । मांगलिक कार्यमा सहभागी हुनाले मनमा केहि शान्ति महशुस गरिनेछ।
जोतिषबारे थप जानकारीका लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ
सिंह न राजा हो, न जंगलमा बस्छ
अध्यक्षको रुपमा राहुलको एक वर्ष पूरा भएकै दिन विधानसभा चुनावको नतिजा आयो
के गरे राहुलले त्यस्तो, जसको कल्पना पनि थिएन मोदी–शाहलाई?
कुनै नेत्रीले पुरुष नेतालाई ‘मोटो .. तालुखुइले’ भन्न सक्छिन्?
दोहोरो अर्थ लाग्ने अश्लील संवाद र कामुक दृश्यले भरिएको फिल्म 'जे सुकै होस्' (ट्रेलर)
‘वास्तविक’ कृषक बिनाको कृषि भ्रमण, १२ दिनमा १० लाख खर्च
रातमा पत्नीसँग च्याट गर्दैथिए, श्रीमतीको कुराले घाँटीमा बेल्ट बाँधेर सेल्फी पठाइ आत्महत्या
अरबपति अम्बानीकी छोरीको बिहेमा हलिउड गायिका बियोन्सेको दमदार प्रस्तुती (भिडियो)
द भ्वाइसः बाहिरिएपछि कहाँ गएर रोए विवेक वाइवा? श्रेया र विद्याको उस्तै हाल (भिडियो)
बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरमा के हुन्छ? जानौं (भिडियो रिपोर्ट)
बालकले एक पटक होइन २–२ पटक दिए मृत्युलाई चुनौती (भिडियोसहित)
कुन प्रश्न थियो, जसको भेनेसाले त्यस्तो जवाफ दिइन् र मिस वर्ल्ड बनिन् ?
अमेरिका हिँडेका युवा साढे २ करोड गुमाएर फर्किए
जानिराखौँ, तपाईकै घरमा पाइने रायोका अद्भूत फाइदा (भिडियो)
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम सिफारिस
साइलेन्ट हर्टअट्याकका ६ लक्षण (भिडियो रिपोर्ट)
अफेयर किंग सलोन बस्नेत भन्छन्, 'गर्लफ्रण्ड त गनेकै छैन', खुलाए आफ्ना थुप्रै गोप्य कुरा
पवन गिरी भन्छन् - नेपाल आइडलले १५ लाख ऋण लाग्यो (भिडियो कुराकानी)
चलचित्र ‘गोपी’को पोस्टर सार्वजनिक, यस्तो देखियो विपिन, वर्षा र सुरक्षा
नेपालमा पाइने १४ प्रजातिका कुकुरको मूल्य (भिडियो रिपोर्ट)
चुनाबका बेला भाजपा नेताकी छोरीको हट फोटो भाइरल, हेर्नुहोस् १३ बोल्ड फोटोहरु
मानव अधिकार र नेपालको संविधान
शृंखलाको जीत, निर्मलाको हार
नरम पाकिस्तान, गरम भारत
सामाजिक संस्थाहरु अब ‘चिकेन लेग’ भन्दा माथि उठ्नु पर्दछ
फोटो पत्रकारको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध लड्छौ, कोही कसैले भ्रम नछरे हुन्छ